Vaovao - Ankalazao ny fisokafan'ny fivarotana lehibe Manx Guangzhou
Tamin'ny 1 Jolay, ny fahitana ny indostrian'ny fanjairana indray dia nifantoka tamin'i Guangzhou, tanàna fitafiana malaza any Shina. Tamin'io andro io dia andro lehibe ho an'ny indostria izany. Ny fivarotana manokana an'ny milina fanjairana Guangzhou Xiaoping sy ny "tanàna fanjaitra fanjaitra Xiaoping" dia nisokatra tamin'io andro io ihany, ary samy faly sy nankalaza izy roa.
Tonga tany an-toerana Andriamatoa Mao Xiaoyong, filohan'ny Zhejiang manks sewing Co., Ltd., izay solontena tokana nanantsoana manokana ny mpanamboatra, mba hanapaka ny tadiny mba hankalazana ny fanokafana ny "fivarotana manokana manks" sy "fanjaitra Xiaoping tanàna fiara ”. Nanatrika ny lanonana ihany koa i Liang Fuxiang, filohan'ny varotra fitaovam-panjaitra any Guangdong, Shao Lishi, filoha lefitra mpanatanteraka ary sekretera jeneraly, Mao Shitang, filoha lefitry ny Fikambanan'ny Masinina ao amin'ny Garment Shenzhen; Wang Hongchen, tale jeneralin'ny orinasa milina fanjairana Hongxin; ary ny mpankafy Sijie, tale jeneralin'ny tanàna milina fanjairana Xiaoping.
Tamin'ny andro fanokafana, feno fifaliana sy fientanam-po ny fivarotana manokana an'ny milina fanjairana Manx, ary nasehon'i manks ny vokatra andian-dahatsoratra "Lingzhi" farany novolavolaina tamin'ny taona 2014. Mandritra izany fotoana izany, ireo hetsika fampiroboroboana malaza toy ny "fividianana ny milina fanjairana farany omena maimaimpoana koa ny iPhone 5S ”sy ny“ 1 yuan ho an'ny milina ”. Nandritra ny lanonana, nasaina nandoko teo amin'ny tranokala ny mpanao hosodoko malaza eto an-toerana mba hampiseho ny kanto "hoso-doko amin'ny lokon'ny vatana" tsara indrindra amin'ity fahavaratra ity, mampifangaro ny kanto sy ny kolontsaina amin'ny fampiroboroboana ny marika Manx.
Manakaiky ny zato ireo magazay manokana sy fivarotana lehibe ho an'ny milina fanjairana manks any an-trano sy any ivelany. Ny fisokafan'ny fivarotana manokana an'ny tanàna milina fanjairana Guangzhou Xiaoping dia maneho ihany koa ny dingana iray mandroso eo amin'ny tsipika fampifangaroana ny fantsona amin'ny fantsona. Ny fivarotana terminal dia tsy mitoetra fotsiny amin'ny endrika marika sy fampiroboroboana, fa mora ihany koa ho an'ireo mpanjifa hitsapana masinina sy hijery santionany amin'ny tranokala ary hanomezana tohana serivisy aorian'ny fivarotana. Tokony hanome lanja feno ny anjara andraikiny amin'ny taratra sy ny fitaomany isika, izay mahasoa ny orinasan-tsinjara sy ny mpiasan'ny marketing hametraka sy hanitatra ny tsena manodidina.
Fotoana fandefasana: Aug-07-2020